Guddiga UNESCO ee Dhaxalka Dunida waxay ku darsadeen goobo cusub Azerbaijan, Portugal, Federationka Ruushka, Spain, iyo UK
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Guddiga UNESCO ee Dhaxalka Dunida waxay ku darsadeen goobo cusub Azerbaijan, Portugal, Federationka Ruushka, Spain, iyo UK
Wararka Ururada • Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Safarka • Investments • News • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Intii lagu gudajiray kulankoodii saakay ee Baku, Gudiga Dhaxalka Aduunka waxay ku qoreen Lix goobood dhaqameed UNESCO Liiska Dhaxalka Aduunka oo lagu daray laba goobood oo dhaqameed Goobaha cusub ee la qoray waxay ku kala yaaliin Azerbaijan, Portugal, Federationka Ruushka, Spain, iyo UK. Qoraallada ayaa socon doona galabnimada.
Dhismaha Royal ee Mafra-Palace, Basilica, Kaniisad, Cerco Beerta Beerta iyo Ugaadhsiga (Taadaada) (Portugal) - Waxay ku taal meel 30 km waqooyi-galbeed ka xigta Lisbon, goobtan waxaa uuraystay King João V sanadkii 1711 oo ah matalaad la taaban karo oo ku saabsan aragtidiisa boqortooyada iyo Gobolka. Dhismahan afar geesoodka ah ayaa waxaa ku yaal qasriyadaha boqorka iyo boqoradda, kaniisada boqortooyada, oo u qaab eg Roman baroque basilica, keniisad Franciscan ah iyo maktabad ay ku jiraan 36,000 oo mug. Dhismaha waxaa dhameystiray jardiinada Cerco, oo leh qaabkeeda joomatari, iyo baarkinka ugaarsiga boqortooyada (Taadaada). Dhismaha Royal Mafra waa mid ka mid ah shaqooyinka cajiibka ah ee uu qabtay Boqorka João V, kaas oo muujinaya awooda iyo gaaritaanka Boqortooyada Boortaqiiska. João V wuxuu qaatay Roman iyo Talyaani baroque qaab dhismeedka iyo farshaxanka iyo shaqooyinka farshaxanka ee ka dhigaya Mafra tusaale aan caadi ahayn Baroque Talyaani.
Sanctuary ee Bom Jesus do Monte oo ku yaal Braga (Portugal) - Goobta, oo ah muuqaal dhaqameed ku yaal dhaadhaca Mount Espinho, oo fiirineysa magaalada Braga ee woqooyiga Portugal, ayaa kicineysa Christian Jerusalem, oo dib u dhiseysa buur xurmaysan oo loo caleemo saaray kaniisad. Meesha quduuska ah ayaa la horumariyay in ka badan 600 sano, ugu horreynna qaab Baroque ah, waxayna muujineysaa dhaqanka Yurub ee abuurista Sacri Monti (buuraha muqaddaska ah), oo ay dhiirrigeliso Kaniisadda Katooliga ee Golaha Trent ee 16th qarnigii, ee falcelinta Dib-u-habeynta Protestant-ka. Isku soo wada duuboo Bom Jesus wuxuu udub dhexaad u yahay a Jidka Isgoyska Taasi waxay kor u qaadeysaa cirifka galbeed ee buurta. Waxaa ku jira taxane cibaado ah oo ay ku xardhan yihiin sawir gacmeedyo ka turjumaya Xaragada Masiixa, iyo sidoo kale ilo, sawirro sawiran iyo jannooyin rasmi ah. Ku Jidka Isgoyska wuxuu ku dhammaanayaa kaniisadda, oo la dhisay intii u dhaxeysay 1784 iyo 1811. Dhismayaasha granite-ka waxay leeyihiin wejiyo faashado lagu caddeeyey, oo lagu farsameeyay dhagxaan la soo saaray. Jaranjarada dabaaldega ah ee Shanta Dareen, oo leh derbiyadeeda, jaranjarooyinka, ilo, taswiirro iyo walxo kale oo qurxin ah, waa shaqada ugu caansan ee Baroque ka dhexjirta guriga.
Kaniisadaha Iskuulka Dhismaha ee Pskov (Ruushka) - Kaniisadaha, cathedral, monasteries, munaaradaha qalcadaha iyo dhismayaasha maamulka ayaa ka kooban goobta, koox taallo ah oo ku taal magaalada taariikhiga ah ee Pskov, oo ku taal daanta Wabiga Velikaya ee waqooyi-galbeed ee Ruushka. Astaamaha dhismayaashaan, oo ay soo saartay Pskov School of Architecture, waxaa ku jira mugga cubic, domes, balbaladaha iyo belfries, oo leh walxaha ugu da'da weyn ee dib ugu laabta 12-kath qarnigii. Kaniisadaha iyo cathedral-ka waxaa lagu dhex daray jawiga dabiiciga iyada oo loo marayo jardiinooyin, darbiyada wareega iyo deyrarka. Waxaa dhiirrigeliyay dhaqanka Byzantine iyo Novgorod, Dugsiga Farshaxanka ee Pskov wuxuu gaaray heerkiisii ​​ugu sarreeyay qarniyadii 15aad iyo 16aad, wuxuuna ka mid ahaa dugsiyada ugu horreeyay dalka. Waxay ku wargelisay isbeddelka qaab dhismeedka Ruushka shantii qarni.
Risco Caido iyo Buuraha Xurmaysan ee Gran Canaria Muuqaalka Dhaqanka (Isbaanish) - Waxay ku yaalliin dhul ballaaran oo buuraley ah oo ku yaal bartamaha Gran Canaria, Risco Caído wuxuu ka kooban yahay buuro, togag iyo qaabab foolkaane ah oo ku yaal dhul kala duwanaansho kaladuwan leh. Muuqaalka waxaa ka mid ah degsiimooyin fara badan oo troglodyte ah - deegaanno, maqaaxiyo iyo ceelal - kuwaas oo da'dooda ay caddeyn u tahay jiritaanka dhaqan ka hor Hispanic-ka jasiiradda, kaas oo ku soo kordhay go'doon, laga bilaabo imaatinka Waqooyiga Afrika Berber, illaa bilowgii xilligeena, illaa deggeneyaashii ugu horreeyay ee Isbaanish ah ee 15thqarnigii. Dhismaha troglodyte sidoo kale waxaa ku jira godadka cibaadada iyo laba macbudyo muqaddas ah, ama almogareenada - Risco Caído iyo Roque Bentayga - halkaasoo munaasabado xilliyeed lagu qaban jiray. Macbudyadan waxaa loo maleynayaa inay ku xiran yihiin cibaado suurtagal ah oo xiddigaha iyo "Hooyada Dunida."
Kormeerka Bangiga Jodrell (Boqortooyada Midowday ee Boqortooyada Ingiriiska iyo Waqooyiga Ireland) - Waxay ku taalaa meel miyi ah oo ku taal waqooyi-galbeed England, kana madax banaan faragelinta raadiyaha, Jodrell Bank waa mid ka mid ah horjoogayaasha kormeerayaasha cilmiga xiddigiska adduunka. Bilowgii isticmaalkeeda, sanadkii 1945, goobtu waxay ku xirneyd cilmi baaris ku saabsan falaadhaha cosmiciga ah ee lagu ogaado raadadka dhawaaqa. Kormeerahan, oo weli shaqeynaya, waxaa ku jira dhowr telescopes raadiye iyo dhismayaal shaqeynaya, oo ay ku jiraan dhismooyinka injineernimada iyo Dhismaha Koontaroolka. Bangiga Jodrell wuxuu saameyn ballaaran ku yeeshay cilmiga sayniska sida daraasaadka meteors iyo moon, daahfurka quasars, quantum optics, iyo raadinta dayax gacmeedyada. Isku soo wada duuboo tiknoolajiyaddan gaarka ah waxay muujineysaa ka-guuritaanka astronomy-ka dhaqameed ee loo wareego astronomy radio (1940s to 1960s), taas oo horseedday isbeddello xag-jir ah oo ku yimid fahamka koonka.
Xarunta Taariikhda ee Sheki oo ay weheliso qasriga Khan (Azerbaijan) - Magaalada taariikhiga ah ee Sheki waxay ku taalaa cagaha Buuraha Weyn ee Caucasus waxaana loo kala qaybiyaa laba webi Gurjana. Halka qaybta woqooyi ee woqooyi lagu dhisay buurta, qaybteeda koonfureedna waxay ku fidsan tahay dooxada webiga. Xarunteeda taariikhiga ah, ayaa dib loo dhisay ka dib markii ay burburisay magaaladii hore qulqulka dhoobada ee 18th qarnigii, waxaa lagu gartaa urur dhaqameed dhaqameedyo leh saqafyo dhaadheer. Waxay ku taalaa dariiqyada ganacsiga taariikhiga ah ee muhiimka ah, qaab dhismeedka magaalada waxaa saameyn ku leh Safavid, Qadjar iyo caadooyinka dhismaha Ruushka. Qasriga Khan, oo ku yaal waqooyi-bari magaalada, iyo guryo ganacsi oo tiro badan, waxay ka tarjumayaan hantida ka dhalatay taranka silkworm iyo ka ganacsiga qumbaha xarka ah dhammaadkii 18.th 19th qarniyo.